१५ प्रतिशत बालबालिका संक्रमित : विद्यालय बन्द गर्ने तयारीमा सरकार, विज्ञ भन्छन्- बन्दले समाधान हुँदैन
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्टको असर बालबालिकामा देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार युके भरियन्टको संक्रमण २६ प्रतिशत देखिएको छ ।
‘२० वर्षमुनिका बालबालिकामा युके भेरियन्ट २२ प्रतिशत र १० वर्षमुनिकामा ४ प्रतिशत देखिएको छ । यो र्‍यान्डम स्याम्पल हेर्दाको रिपोर्ट हो’, महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘जम्मा संक्रमितको अनुपातमा हेर्दा १८ वर्षमुनि १५ प्रतिशत बालबालिका संक्रमित भएका छन् ।’
के हो युके भेरियन्ट
बालबालिकामा नयाँ एस जीन नेगेटिभ (युके भेरियन्ट) देखिने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्लो पटकभन्दा यो पटक संक्रमण बढिरहेको छ । पहिले स्कुल बन्द थियो अहिले छैन । आत्तिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ’, उनी भन्छन् ।बालबालिकामा संक्रमण देखिन थालेपछि केही समय विद्यालय बन्द गरेर भर्चुअल रुपमा पठनपाठन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले पनि भर्चुअल रुपमा पठनपाठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा भर्चुअल रुपमा मात्र पठनपाठन हुनेछ ।
विज्ञ भन्छन्- अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति होइन
विज्ञहरू भने अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । ‘विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ । स्कुलमा सुरक्षाको प्रावधान मिलाएर सुरक्षित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘अहिले नै स्कुल बन्द गर्नुपर्ने फेजमा पुगेका छैनौं ।’
स्कुल बन्द गरेर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने डा. वन्तको तर्क छ । ‘यातायात र भीडभाड हुने भएकाले विद्यालय बन्द गर्ने भनिएको छ । अरु ठाउँको भीडभाडलाई हेरिएको छैन । सडकमा सार्वजनिक यातायात र बजार त्यस्तै छ । स्कुल बन्द गरेर मात्र समाधान हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
विगतकै जसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न भने नहुने उनी बताउँछन् । ‘स्कुल सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भीडभाड कम गरेर ८ घण्टाको सट्टा ४ घण्टामा झार्ने, मास्कको प्रयोग र दूरी कायम गर्ने, बाहिर खुला चौरमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बसको सिफ्ट दुई-तीन चरणमा गर्‍यो भने जोखिम कम हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सोमबार बिहान सम्बन्धित निकायलाई छलफलमा बोलाएको छ । ‘सरोकारवाला निकायको कुरा के हो बुझ्न छलफलमा बोलाका छाैँ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘सबैको राय सुझावका आधारमा निर्णय लिन्छौं ।’
विद्यालय बन्द होइन, मापदण्डको पालना गरौं
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले विज्ञप्ति नै निकालेर सुरक्षित तवरले पठनपाठन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘मुलुकभर कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरेर अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केही निश्चित समयका लागि मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहज रुपमा शैक्षिक संस्थाहरू स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनहुन सरकारसँग माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस् : बढ्दो कोरोना संक्रमण : नेपालमा देखियो यूके भेरियन्ट, कति घातक ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०७७, १८:३३:००